Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. (jir ah magaca shirkada:. Foshan Prostar Science & Technology Development Co., Ltd) waa shirkad si wadajir ah maal-by, Maraykanka Taiwan iyo Dhul baaxadeedka Shiinaha leh in ka badan oo sanado badan, waayo, wax soo saarka iyo waayo-aragnimo ganacsi .
Prostar UPS la qotomiyey 1998, ku takhasusay OEM design iyo tayo sare leh wax soo saarka iyo Prostar brand gaar ah oo warshadaha Uninterruptible Power Supply (UPS), Inverter Power, darfaha Solar, System Power Solar iyo Wind Power nidaamka Qarni, iyo Emergency Power Supply ( EPS) iyo sidoo kale baytariyada kaydinta dayactirka-free.
Prostar leedahay Waaxda Research Design aad u khibrad iyo xirfad leh iyo kuwa si dhow ula macaamiisha shaqeeyaan horumarka wax soo saarka ay sidoo kale la dhigaayo abid ballaarinta kala duwan ee brand Prostar. kooxihii kale waxaa ka mid Quality Control Center, Iibsiga & Production Center, iyo Iibka iyo Xarunta Adeegga Macaamiisha.
Prostar waa wada masuul ka ah horumarinta ganacsiga iyo adeegga ee Shiinaha waynaha. Iyada oo tobankii sano ah dadaalka weyn, Prostar ayaa Boodhkan taxanaha ah ku tilmaamay oo sahay xoog iyo baytariyo si weyn loo isticmaalaa in beerihii maaliyadda, isgaarsiinta, korontada, chemistry shidaalka, maaliyadda iyo canshuuraha ee Shiinaha, oo la si sharaf leh uga hadashay by macaamiisha. Qaadashada iyo samaynta badeecada-heer caalami ah oo leh aragti xirfad carbuunta sidii ay masuuliyad, Prostar ayaa sheegay in daraasad joogto ah iyo hal-abuurnimo in ay ku dadaalaan si ay u koraan shirwaynaha cusub ee mustaqbalkiisa ciyaareed ka. Waxaan kibir eekaan ruuxa "daacadda, Iskaashiga, tartan iyo Hal-abuurka".
Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. leeyahay badan oo shaqaalaha farsamada khibrad leh, iyo dhammaan shaqaalaha ayaa la kulma tababarka farsamada xirfad iyo baaritaan. Prostar maray sugida ee ISO9001, ISO14001, CE, RoHS iyo IQNet (dalalka xubnaha ka ah adduunka oo dhan in ka badan 30). Maamulka tayada adag oo taxadir ku siinayaa macaamiisha kalsooni weyn. Muddo sanado ah, wax soo saarka Prostar tilmaamay waxaa si weyn loo qaybiyey Europe iyo sidoo kale Affrica, Oceania, Southeast Asia, South America iyo Bariga Dhexe oo dhan.
Iyada oo ay is-dhexgalka iyo ayna khayraadka, Prostar focus on qorsheynta istiraatiijiga ah ee Quality, Qaabdhismeedka, Suuq, Fashion iyo Innovation. Ku hayaa mabda'a "Macaamiisha iyo Kalsoonida First", waxaan aaminsanahay in ayna tayo hufan waa shardi ka mid ah our goal kama dambaysta ah ee qancinta macaamiisha. Waxaan ugu yeedhi macaamiisha oo dhan si ay u inoo taageeraan, si dhow u wada shaqeeyaan si ay u gaaraan lacagta labada dhinac. Daacadnimo rajeynayaa inaan noqon kartaa adeegga aad si mustaqbalka dhow! Waayo, weydiimaha, waxaad noogu soo diri kartaa e-mail at info@prostar-cn.com.